Nhau - Pane here musiyano pakati pePOF uye kupisa inodzikira firimu?
Pane chero musiyano pakati POF uye kupisa inodzikira firimu?
Pane chero musiyano pakati POF uye kupisa inodzikira firimu? POF zvinoreva kupisa inodzikira firimu. Iro izere zita rePOF rinonzi multi-layer co-extruded polyolefin kupisa shrinkable firimu. Iyo inoshandisa yakatetepa yakaderera-density polyethylene sepakati yepakati (LLDPE) uye co-polypropylene (PP) sematanda emukati nekunze. Iyo inoumbwa nekupurasitiki uye kuburitsa kunze kwemuchina, uye zvobva zvaitika zvakasarudzika maitiro sekufa kuumba uye firimu bubble inflation. Izita rayo reChirungu ndiPolyole fin. Kazhinji kutaura, iyo inopisa shrinkable firimu ndeye POF, kana Polyole fin Shrink Firimu.
1. Kune chikafu chakagwamba nechando, iyo nguva yekuchengetera yakareba.
2. Kugadzikana uye kusimba kutambanuka.
3. Nebasa rekuzvinamatira.
4. Iyo ine yakanyanya kukwirisa kubwinya uye kujeka.
5. Pakutonhora kwakadzika, inopfupika nekukurumidza.
6.Kuisa mucherechedzo kwakanaka kwazvo. Nekuda kwesimba rayo rakasimba rekubatanidza, shrink firimu inoshandiswa mune yehunyanzvi yakatenderedza uye muchina wakakomberedza.
7. Yakachengeteka uye isina chepfu: Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa mukupisa zvinopisa firimu hazvisi-zvine chepfu uye ndizvo chete zvakasvibirira zvekuputira zvinhu zvakasimbiswa muUnited States.
8. Kugadzikana kwakanaka: dzivisa kukanganisa kwezvinhu zvakapakurwa nemauto ekunze, uye tamba basa mukudzivirira zvinhu zvakapakurwa. Iko kurongedza mutengo kwakaderera, uye mhando yakaderera.
9. Yakakwira shrinkage chiyero: Iyo shrinkage chiyero chekupisa shrinkable firimu inogona kusvika kusvika ku75%, iyo inokodzera kuunganidzwa kurongedza zvinhu zvakawanda, izvo zviri nyore kutakura. Uye inogona kusangana nezvinodonha zvinodiwa zvezvinhu zvakasiyana.
10. Yakasimba inotonhora kuramba: Kunyangwe pazasi pemamiriro ekubvisa 50 madigiri Celsius, ayo epanyama zvimiro haazoshanduke, saka inokodzera kurongedza uye kutakurwa kwechikafu chakagwamba.
Pvv kupisa kupisa shrinkable firimu yakakodzera kune iyo yekuisa zvido zvezvigadzirwa mumaindasitiri akasiyana. Inogona kushandiswa kune imwechete kana diki kuunganidzwa kurongedza, kana hombe tireyi kurongedza. Inogona kushandiswa kumahofisi, matoyi, machira, zvigadzirwa zvemapepa, zvinwiwa, mushonga, kupisa-kudzora kuputira kwerurimi-uye-groove pasi, zvishandiso zvemidziyo, nezvimwewo.Firimu inodzikira inodziya ndiyo inonyanya kushandiswa uye ichikurumidza kugadzira nyowani inoshamwaridzika yezvakatipoteredza. firimu mune chairo nyika.
Iyo ine yakajeka kujekesa, yakakwira shrinkage, kukwirira kuomarara, kupisa kwakanyanya kwekuisa chisimbiso kuita, antistatic, yakanakisa kutonhora kuramba, yakachengeteka uye yakavimbika yakapfava shrinkage membrane. Inoshandiswa zvakanyanya mupakeji yekunze uye pamwe chete kurongedza mumaindasitiri akasiyana siyana senge chikafu, zvigadzirwa, zvipo, mishonga, zvinyorwa, matoyi, odhiyo-zvigadzirwa zvigadzirwa, zvemagetsi, epurasitiki Hardware, zvezuva nezuva zvinodikanwa, nezvimwewo. zvizere otomatiki kurongedza michina.
Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Shrink Firimu Pvc, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha,